ပု ထု ဇဉ် ဆို သည်မှာ လေ—————- | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပု ထု ဇဉ် ဆို သည်မှာ လေ—————-
ပု ထု ဇဉ် ဆို သည်မှာ လေ—————-
Posted by ---မိုးကျေ၇ွှကိုယ်-----dennis rockstar on Nov 30, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
” ဟိုဘက်လမ်းထိပ်က ပဲပြုတ်သည် ဒေါ် စိန်လေ”
“သူ့ ခဗျာ မနေ့ ညက သူ့ အိမ် သူခိုးဝင်ခိုးလို့ တဲ့အဲ့ဒါ ၇ှိသမျှ ပဲပြုတ်ေ၇ာင်းစားလို့ ၇တဲ့အ၇င်းအနှီးတွေေ၇ာသူ့ သားလေး နောက်နှစ် တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ စုထားတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေပါ အကုန်ပါသွားတယ်တဲ့ သူ့ ခဗျာ သနားပါတယ်————- မ၇ှိလို့မှ ပဲပြုတ်ေ၇ာင်းစား၇တာ ——–သူခိုးကလည်း ခိုးစ၇ာ၇ှားလို့ဒီလို အိမ်မှ သွားခိုး၇လားမသိဘူး ————–ပြီးတော့ သူက ကျမတို့ အိမ်ကိုလည်းအကြွေးေ၇ာင်းပေးတယ်မဟုတ်လား”
” တော်ေ၇့ ”
“ဟိုဘက်လမ်းထိပ်က ပဲပြုတ်သည် ဒေါ် စိန်လေ”
“သိန်း ၁၀၀၀ထီပေါက်လို့တဲ့ တော်ေ၇့အလကား အလုပ်မ၇ှိ ၁၀၉ သူများ အိမ်တကာ လှည့် ပြီး ပဲပြုတ်ေ၇ာင်းတာကနည်နည်း အတင်းပြောတာက များများနဲ့ ၊ ပြီးတော့ သူ့ ၇ဲ့အဲ့ ဒီ ကျက်သေ၇မ၇ှိတဲ့မျက်နှာနဲ့သူဌေး ဂိုက်ဖမ်းနေမှာ မြင်ယောင်သေးတယ် ၊သူ့သားကလည်း ၇ပ်ကွက်ထဲ လှည့် ၇န်ဖြစ်နေတဲ့ ပေါက်လုပ်ပဲစား အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ပြုံးပြလှည့်ပြန် ဓါတ်တိုင်သေးပန်း အမြီးကျက်အမြီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား သူ့ အပြစ်ငါမပြော င့ါအပြစ် သူမပြော ကောင်မျိုး။ ခုလည်း သူတို့ ထီပေါက်လို့အိမ်မှာ အလှူ လုပ်နေတယ်လေ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ကျွေးတာကတော်တော် ကြွားမှာကများများ”
” အလှူ လုပ်တယ်ဆို မင်းကိုလည်း ဖိတ်ထားတယ်မဟုတ်လား မင်း မသွားဘူးလား”
“သွားပါဘူး သူ့ ၇ဲ့ ကျက်သေ၇ မ၇ှိတဲ့ မျက်နှာ ကြီး ကြည့်ဖို့ များ -အိမ်မှာလည်း စား နိုင် ပါတယ်တော့ ——-” ။ ။
သြော် လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ရပါဘူးကွယ် ရို့
ဂလိုဒွေလည်း ရှိတယ် ..
ဂလိုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဒွေလည်း အားဂျီးဘဲ …
ကိုယ်ကောင်းအောင်နေဖို့ အဓိကပဲ မဟုတ်လားဗျာ ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း.. အဲဒီသဘောကို.. သိပ်မကြာသေးခင်ကတင်.. ပြောခဲ့တယ်..
( ကြုံလို့.. အဆင်ပြေသိသူများရှိရင်.. ဘယ်နေရာမှာပြောတယ်.. တိတိကျကျစာသားလေးနဲ့ညွှန်းစေချင်ပါတယ်..။ ကြည့်ရတာ.. ယူအက်စ်လာတုံးပြောတာလို့.. ထင်မိနေတာ…)
အဲဒီအပေါ်က.. အဖြစ်အတိုင်း.. တကယ်ဖြစ်ကြတာ.. ဖြစ်ပါကြောင်း..
အဲဒါ စနစ် ကြောင့် လူတွေ စိတ်ဓာတ် ပျက်သွားတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား သူကြီးရေ ???????
အမေရိကားရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထဲရောက်ရောက်.. ဂျပန်ရဲ့..ဆာမူရိုင်းဒီမိုကရေစီထဲရောက်ရောက်.. မြန်မာက.. မြန်မာပါပဲ..
အဲဒီမှာ.. မြန်မာနိုင်ငံသေးသေးလေး..Small Myanmar မိုဒယ်လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်..။
စနစ်ကြောင့်မဟုတ်.. စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါကြောင်းပါနော…။ :harr:
ဆို … ဆို … ဆို ….
စနစ်ကြောင့် မဟုတ် လူတွေကြောင့်၊
စနစ်ကောင်း ရဖို့ လူတွေ ကအရင်စပြင်ရမယ် ဆိုတာ လေး သိပြီပေါ့နော်။
အဲဒီ လူကောင်းတွေ က ပြုပြင်ပြီး ချလိုက်တဲ့ စနစ် ကမှ နောက်ပိုင်း မှာ လူတွေ ကို ပြန်ထိန်း သွားမှာပါ။
စနစ်ကောင်း ရဖို့ ဘယ်သူတွေက များ ကိုယ့် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ပြင်ပေးမှာလဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အာဏာမရှိတဲ့ လူနည်းစု နဲ့ ကတော့ ဒီလိုဘဲ တအိအိ နဲ့ သွားနေတော့မှာဘဲ။
ရှေးတုန်းက မင်းတွေကတော့ တွက်ချက်လိုက်လို့ တိုင်းပြည်ကပ်ဆိုက်မယ် ဘေးဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာ သိရင် အဲ့ဒီဘေးဆိုး က လွတ်အောင် သူတို့ အသက်ကို အသေခံပြီး အဲ့ဒီနှစ် သက္ကရာဇ်ကို ဖြိုတဲ့ အလေ့ရှိကြတယ်။
ဖတ်စက သိပ်နားမလည်ဘူး ဘာကြောင့်များ အသက်ကို စတေးပြီး ဒီလိုလုပ်လည်းပေါ့ ။ နောက်တော့ မှ သိတယ် မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါးညီတဲ့ မင်းတွေပဲ စတေးခံဝံ့တယ်ဆိုတာကိုလေ။
ဆိုတော့ ခုလည်း ဘေးကျပ်နံကျပ်ရောက်နေတာဆိုတော့ စနစ်ကောင်းတခု ရဖို့ လူကောင်းတွေ ပြန်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်သူတွေများ သက္ကရာဇ်ဖြို စတေးခံဝံ့ ကြလည်း မသိဘူးနော်
ဒင်းတို့ ဖုန်းကံနိမ့်ရင်လည်း ဖြိုတာပဲ.
အဲ့လို အဖြိုကောင်းလို့ ဗိရုမာ ပြက်ကဒိန်မှာ နှစ်နည်းနည်းလေး ရှိတာ.
ကောဇာ နဲ့ရော ယိုးဒယား ပြကဒိန်နဲ့ပါ ပိုးစိုးပက်စက် ကွာကုန်တာ.
လက်ရှိသွားနေတဲ့ စနစ်အတိုင်းကို လူတွေပြောင်းကြည့်ရင် ကောင်းမလား..?
ဘီလ်ဂိတ်တို့၊ လီကွမ်ယုတို့နဲ့ အစားထိုးပြီး လက်ရှိစနစ်အတိုင်း တသွေမတိမ်း လုပ်သွားရင်….. ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မလဲမသိဘူးနော်..သူကြီး..
There is not built in but do not made of human Keri
ဂူးဂဲ က ပြန်လာတာ ဟီး
လုပ်ရင်ဖြစ်တယ် မလုပ်ရင် မဖြစ်ဖူး
မဖြစ်ဖူးဆိုတာ ဖြစ်အောင်မလုပ်တဲ့ လူရဲ့ အပြစ် တဲ့
စနစ်ဆိုတာ လူကလုပ်တာ. လူမကောင်းမှတော့ အဲ့လူလုပ်တဲ့ စနစ်ကလည်းကောင်းမှာ မဟုတ်.
ပညတ် ပရတ်မတ် နဲ့ ရှင်းရဦးမား ကွယ်.
( သဂျီးဘက်မှ အရီးဘက်ကို သဂျက်သမီး တိုက်စစ်မူး ငဂီ့ က တစ်ဂိုး ရှူး သွားပါသည် )
ဟဲ့ ဂီဂီ ရဲ့ (ဒေါ်မြလေးပုံဖြင့် ခေါ်သည်)
မင်းစိတ်ကူးယဉ် ခမည်းတော်ကြီး က သာ အရင်က စနစ် စနစ် နဲ့ စနစ် ကို ကိုင်ထားတာလို့ ထင်တာဘဲ။
အရင်က တစနစ်ထဲ စနစ်နေတာ။
အခုတော့ သူလဲ ပေါက်သွားပြီထင်ရဲ့။ (သဘော)
အရီး က နဂိုထဲ က ခေါင်းချောင်ချင်နေတာ မင်းလုပ်မှ ပိုချောင်သွားပြီ။
ဂိုးရှူးရအောင် ဂဇက်ကို ဘောကွင်းများမှတ်နေသလား ဖားပြုတ်ရဲ့
မနိုင် နိုင်ရာ ၀င်ဟောင်သွားပါသည်။ အစကထဲက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပါ့လား ။ ဂူးဂဲကြီးကလည်း စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဖူး ။
ကျုပ်က.. “စနစ်ကြောင့်မဟုတ်”ဆိုတဲ့စာသားကို.. မူပိုင်ယူသုံးနေတာ.. ကမ္ဘာဦး.. အဲ..အဲ.. “ဂဇက်ဦး”ကတည်းက..။
.. နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ..တဲ့..။
လူသားတွေရဲ့..စိတ်ဓါတ်ကိုချယ်လှယ်လွှမ်းမိုးတာ.. ဘာလည်းသိလား.. ဘာသာရေး..တဲ့..။
ဒေါ်စုက ခေတ်စနစ်မပျက်ခင်မှာ ကြီးပျင်းခဲ့လို့ မှန်ကန်တဲ့ အခြေခံပညာရေး စနစ်ကိုရသွားတယ်။ ကြီးလာတော့လည်း အထက်တန်းနဲ့ တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို အိန္ဒိယနဲ့ အင်္ဂလန်မှာ သင်ယူခဲ့ရတယ်။ ဘဝတလျောက်လုံးလည်း စနစ်တကျ အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်တွေအောက်မှာ လေ့လာသင်ယူခွင့်ရတယ်။ သူသာ မဆလခေတ်၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်တွေမှာ နေခဲ့ရရင် အခုလို ထွန်းတောက်နိုင်ပါ့မလား သဂျီးဇုတ် သဂျုပ်ဇီးရဲ့….. :chee:
အဲဒလို အဖြစ်မျိုးလဲ.ရှိသလား..လို့ ပဲ..
တရုတ်ကားထဲက ဘုရင်မင်းမြတ်တွေလို …
မြန်မာတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ တွေထဲက နှစ်သက်စရာနဲ့
မနှစ်သက်စရာ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် မနှစ်သက်တာကများတယ်
ကျုပ်လဲ မြန်မာ ထဲကမြန်မာတစ်ယောက်ပဲ တတ်နိုင်သလောက်တော့
မြင့်မြတ်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်လာအောင် လူတိုင်းမှာ ကြိုးစားဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်တာပဲ။
မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ လို့ ဆိုတဲ့အထဲမှာမှ…
ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျသူကို အားနည်းသူကို မေတ္တာ၊ ဂရုဏာထားဖို့ လွယ်ပေမယ့်…..
ကိုယ်နဲ့တန်းတူ (သို့) ကိုယ့်ထက်နိမ့်သူက ကိုယ့်ထက်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာ မုဒိတာ ထားဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ :eee:
ဒီနေ့သူကြီးရဲ့ စိတ်ဓါတ်+အသိဥာဏ်+ဆင်ခြင်တုံတရား+အတွေးအခေါ် မျိုး
ထင်တဲ့သူရှိရင် ကြိုက်တဲ့ကြေးနဲ့ လောင်းရဲပါကြောင်း….